a fella | 01/03/2021 | News | No Comments
Joshua Wong ဆိုတာ ၁၉၉၆ ခုနှဈမှ မှေးတဲ့ ဟောငျကောငျလူငယျလေး တဈယောကျပါ။
ကမ်ဘာ့မှာ ဒုတိယ အငျအားအကွီးဆုံး လို့ပွောလို့ရတဲ့ ဘဂေငျြးအစိုးရကို အသကျ ၁၄ နှဈသားကတညျး ဝဖေနျထောကျပွ အတိုကျအခံလုပျခဲ့တဲ့ ဟောငျကောငျ ဒီမိုကရစေီ အရေးလုပျရှားသူ။
သူ့အသကျ ၁၄ နှဈမှာ ဘဂေငျြး အစိုးရ ရဲ့ ဟောငျကောငျမှာ ပွဋ်ဌာနျးတဲ့ ပညာရေး စနဈကို မကွိုကျလို့ Scholarsim ဆိုတဲ့ အဖှဲ့ကို ဖှဲ့ပွီး ကြောငျးသားလှုပျရှားမှုတှေ စတငျပွုလုပျခဲ့တယျ။
ဘဂေငျြးမှာ ရှီကငျြးပငျ အစိုးရတကျလာတဲ့အခါ တရုတျအစိုးရရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ပိတျစို့မှုတှနေဲ့ ဟောငျကောငျရဲ့ လှတျလပျခှငျ့တှေ အပျေါမှာ မြားစှာ ခယျြလှယျလာတာကွောငျ့
Wong ဦးဆောငျတဲ့ Scholarism မှ ကြောငျးသားလူငယျမြားဟာ လမျးပျေါတှပေျေါကို နောကျတဈကွိမျထှကျလာခဲ့တယျ။
ဟောငျကောငျ လူငယျတှရေဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှဟော အရငျခတျေလို ပုံစံတှမေဟုတျတော့ဘဲ လူငယျတှဟော ဆန်ဒပွပှဲ တဈခုလုံး၏ စ လယျ ဆုံး ကိစ်စရပျမြားကို စနဈတကြ ပွငျဆငျပွီး လမျးမတှပေျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
အစားအသောကျ ၊ နရေေးထိုငျရေး နှငျ့ အမှိုကျသိမျးတာထိ အားလုံးကို လှဈဟငျးမှု မရှိ ဆောငျရှကျခဲ့လို့ ကမ်ဘာကပါ ခြီးမှမျးခဲ့ရပါတယျ။
ထိုဆန်ဒပွပှဲနှငျ့အတူ ထီးလှုပျရှားမှု (Umbrella Movement) ဆိုတာ ပျေါထှနျးလာခဲ့ပါတယျ။ အကွမျးမဖကျ ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနစေဉျ လာရောကျပွီး သပိတျဖွိုခှငျးတဲ့ ရဲတှရေဲ့ ရနျကို ကာကှယျဖို့ ထီးမြားကို အသုံးပွုရာကနေ ထီးလှုပျရှားမှု အရှိနျအဟုတျက မွငျ့တကျလာခဲ့တာပါ။
Wong ရဲ့ အရှိနျအဝါကလညျး ထို ထီးလှုပျရှားမှုနှငျ့ အတူ တဟုနျထိုး ကွီးမားလာခဲ့ပါတယျ။ ထိုအခြိနျက Wong ရဲ့ အသကျက ၁၇ နှဈ ပဲ ရှိပါသေးတယျ။ သို့သျော Superpower ဆိုတဲ့ ဘဂေငျြးအစိုးရအတှကျ အလှနျအကွပျရိုကျစတေဲ့ ခြာတိတျတယောကျဖွဈနပေါပွီ။
Wong ကို ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးမှုတှေ လုပျသျောလညျး ရပျတနျ့မသှားခဲ့ပါ။ အစာငတျခံ ဆန်ဒပွသညျအထိ လုပျဆောငျခဲ့ပွီး လူထုကို အားမလြော့သှာအောငျ လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၆ခုနှဈမှာတော့ Wong ဟာ သူတို့ရဲ့ Scholarism ကို ဖကျြသိမျးပွီး နိုငျငံရေးလှုပျရှားမှုမြားကို စတငျရနျအတှကျ Demosistō ဆိုတဲ့ ပါတီကို တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈ အတှကျ နိုဘယျဆု စာရငျးမှာ တငျသှငျးခွငျးခံရသညျ အထိ Wong တဈယောကျ ကြျောကွားလာသညျနှငျ့ အမြှ တရုတျ အစိုးရကလညျး ဖိနှိပျမှုတှေ အမြိုးမြိုး လုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျထိ တရုတျအစိုးရက သူ့ပွညျတှငျးမှာ Joshua Wong ဆိုတဲ့ Keyword ကို အငျတာနကျမှာ ရှာလို့ မရအောငျအထိ လုပျထားပါတယျ။
Joshua Wong ဟာ လူငယျလေး တဈယောကျဆိုပမေယျ့ လူ့အခှငျ့အရေး၊ ဒီမိုကရစေီ အရေး၊ လှတျလပျခှငျ့ ဆိုတာတှေ အတှကျ အငျအားကွီးပါတယျဆိုတဲ့ တရုတျအငျပါယာကွီးကို စိနျချေါဝံ့ခဲ့သူပါ။
သူပွောခဲ့တဲ့ စကားတဈခှနျးက It’s time to let Emperor Xi (Chinese President Xi Jinping) be aware that now is our battle, …We stand in solidarity, we stand as one. သူနဲ့အတူ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှဟောလညျး အသကျသုံးဆယျအောကျ လူငယျလေးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Natham Law, Alex Chow ဆိုသညျ့ လူငယျမြားဟာလညျး လကျရှိဟောငျကောငျ ဒီမိုကရစေီအရေးမှာ တကျကွှလှုပျရှားသူမြားဖွဈပါတယျ။ အာဏာရှငျဆိုတာ လူကွီးတှကေို မကွောကျပါဘူး။
လူငယျတှကေိုပဲ ကွောကျတာပါ။ လူငယျဆိုတာ တကျကွှတယျ။
ဇှဲမလြော့ဘူး။ ဇှတျလုပျတယျ။ လှတျလပျခှငျ့ကို မွတျနိုးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခတျေအဆကျဆကျ အာဏာရှငျနဲ့ လူငယျတှဟော ဆနျကငျြဖကျဖွဈခဲ့ပွီး၊ လူငယျတှဟော အာဏာရှငျတှကေို အမွဲတှနျးလှနျခဲ့တာပါ။
Gen Z တို့ အတွက် အားကျစရာလူငယ်တစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) Joshua Wong
Joshua Wong ဆိုတာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ မွေးတဲ့ ဟောင်ကောင်လူငယ်လေး တစ်ယောက်ပါ။
ကမ္ဘာ့မှာ ဒုတိယ အင်အားအကြီးဆုံး လို့ပြောလို့ရတဲ့ ဘေဂျင်းအစိုးရကို အသက် ၁၄ နှစ်သားကတည်း ဝေဖန်ထောက်ပြ အတိုက်အခံလုပ်ခဲ့တဲ့ ဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီ အရေးလုပ်ရှားသူ။
သူ့အသက် ၁၄ နှစ်မှာ ဘေဂျင်း အစိုးရ ရဲ့ ဟောင်ကောင်မှာ ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို မကြိုက်လို့ Scholarsim ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပြီး ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
ဘေဂျင်းမှာ ရှီကျင်းပင် အစိုးရတက်လာတဲ့အခါ တရုတ်အစိုးရရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ပိတ်စို့မှုတွေနဲ့ ဟောင်ကောင်ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေ အပေါ်မှာ များစွာ ချယ်လှယ်လာတာကြောင့်
Wong ဦးဆောင်တဲ့ Scholarism မှ ကျောင်းသားလူငယ်များဟာ လမ်းပေါ်တွေပေါ်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဟောင်ကောင် လူငယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ အရင်ခေတ်လို ပုံစံတွေမဟုတ်တော့ဘဲ လူငယ်တွေဟာ ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခုလုံး၏ စ လယ် ဆုံး ကိစ္စရပ်များကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ပြီး လမ်းမတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အစားအသောက် ၊ နေရေးထိုင်ရေး နှင့် အမှိုက်သိမ်းတာထိ အားလုံးကို လှစ်ဟင်းမှု မရှိ ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ ကမ္ဘာကပါ ချီးမွမ်းခဲ့ရပါတယ်။
ထိုဆန္ဒပြပွဲနှင့်အတူ ထီးလှုပ်ရှားမှု (Umbrella Movement) ဆိုတာ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေစဉ် လာရောက်ပြီး သပိတ်ဖြိုခွင်းတဲ့ ရဲတွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ထီးများကို အသုံးပြုရာကနေ ထီးလှုပ်ရှားမှု အရှိန်အဟုတ်က မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။
Wong ရဲ့ အရှိန်အဝါကလည်း ထို ထီးလှုပ်ရှားမှုနှင့် အတူ တဟုန်ထိုး ကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်က Wong ရဲ့ အသက်က ၁၇ နှစ် ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သို့သော် Superpower ဆိုတဲ့ ဘေဂျင်းအစိုးရအတွက် အလွန်အကြပ်ရိုက်စေတဲ့ ချာတိတ်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
Wong ကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းမှုတွေ လုပ်သော်လည်း ရပ်တန့်မသွားခဲ့ပါ။ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသည်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လူထုကို အားမလျော့သွာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၆ခုနှစ်မှာတော့ Wong ဟာ သူတို့ရဲ့ Scholarism ကို ဖျက်သိမ်းပြီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို စတင်ရန်အတွက် Demosistō ဆိုတဲ့ ပါတီကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွက် နိုဘယ်ဆု စာရင်းမှာ တင်သွင်းခြင်းခံရသည် အထိ Wong တစ်ယောက် ကျော်ကြားလာသည်နှင့် အမျှ တရုတ် အစိုးရကလည်း ဖိနှိပ်မှုတွေ အမျိုးမျိုး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ တရုတ်အစိုးရက သူ့ပြည်တွင်းမှာ Joshua Wong ဆိုတဲ့ Keyword ကို အင်တာနက်မှာ ရှာလို့ မရအောင်အထိ လုပ်ထားပါတယ်။
Joshua Wong ဟာ လူငယ်လေး တစ်ယောက်ဆိုပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အရေး၊ လွတ်လပ်ခွင့် ဆိုတာတွေ အတွက် အင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ တရုတ်အင်ပါယာကြီးကို စိန်ခေါ်ဝံ့ခဲ့သူပါ။
သူပြောခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက It’s time to let Emperor Xi (Chinese President Xi Jinping) be aware that now is our battle, …We stand in solidarity, we stand as one. သူနဲ့အတူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဟာလည်း အသက်သုံးဆယ်အောက် လူငယ်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Natham Law, Alex Chow ဆိုသည့် လူငယ်များဟာလည်း လက်ရှိဟောင်ကောင် ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်ဆိုတာ လူကြီးတွေကို မကြောက်ပါဘူး။
လူငယ်တွေကိုပဲ ကြောက်တာပါ။ လူငယ်ဆိုတာ တက်ကြွတယ်။
ဇွဲမလျော့ဘူး။ ဇွတ်လုပ်တယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မြတ်နိုးတယ်။ ဒါကြောင့် ခေတ်အဆက်ဆက် အာဏာရှင်နဲ့ လူငယ်တွေဟာ ဆန်ကျင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ လူငယ်တွေဟာ အာဏာရှင်တွေကို အမြဲတွန်းလှန်ခဲ့တာပါ။
သေနတ်မောင်းခလုတ်ဆွဲမညှစ်ခင် ကလေးနှင့် မိသားစုကို စဉ်းစား ရန် ရဲနှင့် စစ်တပ်ကို အောင်လအန်ဆန်းပြော
ဆိုင်ကယ်ဝယ်နိုင်ဖို့ မိဘအုတ်ဂူမှအရိုးတွေကို ပြန်လည်တူးဖော်ပြီးရောင်းချခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ( သေတာတောင် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့ သားမိုက်ကြီး.)
လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် ဆက်ထားရန် သမ္မတထရမ့် အမိန့်ပေး ( သမ္မတရာထူးကသာ ဆင်းချင်ဆင်းမယ် အညှိးတော့ မပြေသေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား ထရမ့် )
လင်ယောက်ကျားကို ဦးနှောက်မရှိတဲ့ ငတုံးကြီးလို့ ထင်ပြီး ဖောက်ပြန်နေတဲ့ အမျိုးသမီး၊ လင်ငယ်နဲ့ အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသောအခါ